Qalliinka iyo Tuubbooyinka Wejiga - Ellicott Dredges Blog
Qalliinka iyo Tuubbooyinka Geotextile
Source: by Maarso A. Torre - CE News ee Ganacsiga Injineeriyada Rayidka
Tuubbooyin waaweyn oo ay ka buuxaan waxyaabo qalalan ayaa loo adeegsaday mashaariic kaladuwan oo xeebta iyo gudaha ah. Tuubbooyinka, oo laga sameeyay polyester xoog leh ama polypropylene geotextile, ayaa si habsami leh uga buuxsamay biyo duug ah, sida Ellicott® brand Series 370 ama Ellicott ka weyn® sumadda ”Dragon®”Cutter dredge. Tuubooyinka geotextile waxaa caadi ahaan lagu buuxiyaa waxyaabaha goobta yaal; si kastaba ha noqotee, qalab kale ayaa la soo dejin karaa lana isticmaali karaa. Codsiyada caadiga ah waxaa ka mid noqon doona: dib u soo celinta ciida, dhismaha diqa, dhismaha gumaarka, dhagaxyada macmalka ah, iyo ka hortagga qashinka fudud. Tuubooyinka ayaa laga buuxiyaa goobta dhexdeeda rakibistuna waa mid fudud oo aan qaali ahayn.
Noocyada Caadiga ah ee 370 Ellicottrand Brand Dredge
Buuxinta tuubooyinka geotextile-ka ee leh walxaha duugga ah ayaa lagu dhaqmayay sannado badan; si kastaba ha noqotee, tiknoolijiyada ayaa weli loo tixgeliyaa inay tahay bilow. Taariikhda kooban ee soo socota ayaa qayb ahaan laga soo qaatay "Geotextile Tubes-Case Histories iyo Casharrada laga Bartay" ee Sprague, Bradley, Toups, iyo Tababaraha.
Dadaal soo noqnoqday oo lagu doonayo in lagu kordhiyo faa'iidada awooda xaddidaadda carrada ee geotextiles ayaa muuqata isku dayga lagu doonayo in lagu dhiso dhismeyaal xarriiq ah oo ka imanaya tuubooyin biyood ahaan u buuxsamay. Sprague waxay tilmaamtay in dadaalada noocan oo kale ah ee lagu buuxinayo labada tuubo ee maro aan la mari karin oo leh ciida taariikhda ilaa sanadkii 1967. Sida la fahmi karo, ciida ayaa noqotay walxaha buuxiya ee xulashada tuubooyinka geotextile ee haydarooliga ka buuxsamay awoodeeda si ay si fudud ugu degto tuubada dhexdeeda iyo si xur ah daadi, taas oo abuureysa qaab deggan. Sidaa awgeed, sida laga soo xigtay Sprague, inta badan isticmaalka la soo sheegay ee tuubooyinka haydhka ka buuxsama ilaa taariikhda waxay ku lug leeyihiin buuxinta ciidda. Waxoogaa horumar ah oo ka sameysan tuubbada geotextile ayaa la tilmaami karaa inay si gaar ah muhiim u yihiin.
Dabayaaqadii 1970-yadii, tuubo geotextile ah oo ka buuxsamaysa haydarooliga oo adeegsanaya maro aan la mari karin ayaa la sameeyay. Nidaamka, oo lagu iibiyay magaca ganacsiga "Longard Tube," waxaa loo adeegsaday dhowr rakibid tijaabo ah.
Isticmaalka walax qalalan si loo buuxiyo tuubooyinka qalliinka ayaa marka hore lagu tijaabiyay Brazil iyo Faransiiska horaantii 1980s. Dalka Baraasiil, dikesyada walxaha isdaba-marinta ee joogtada ah ayaa laga dhisay tuubbooyinka loogu talagalay dib-u-sheegashada dhulka. Farsamadan ayaa loo adeegsaday in lagu go'doomo oo laga haro meel ka baxsan goobta faddarayn ee Faransiiska.
Sprague wuxuu cadeeyay in 1989 ACZ qandaraasleyaasha BV ee Nederland ay codsadeen tuubooyin qashin-qub leh oo ay ka buuxaan dhismaha wabiga hoose ee biyaha wabiga. Adigoo isticmaalaya baaldi qaab-goonni ah sagxadda lagu dhejiyey, harooyinka waxaa lagu dhisay meelayn iyo xiridda tuubooyin horay loo buuxuyay. Kow iyo toban gumaad ayaa la sameeyay, iyaga oo adeegsanaya in ka badan tuubbooyinka 500.
Buuxinta tooska ah ee tuubooyinka geotextile ee goobta iyadoo la adeegsanayo khad bixinta dhalmada ayaa lagu guuleystey sanadkii 1988 Badda Waqooyiga, oo ka baxsan xeebta Jarmalka. Tuubooyinku waxay sii wadaan inay bixiyaan xaddidaadda buuxinta dhinaca dhulka iyo kahortagga mawjadaha iyo hirarka dhinaca badda.
Waxaa aasaasay Ciidanka Mareykanka ee Qeybaha Injineerada ah, xiisaha dib u soo cusboonaaday ee tuubbooyinka qunjireyntu waxay bilaabeen inay soo baxaan horaantii 1990s markii dowladda Mareykanka ay bilaawday inay sii kordhiso adeegsiga teknolojiyadan cusub. Tijaabooyin badan oo guul leh ayaa adeegsaday tuubooyin dhuuban oo ay ka buuxaan ciid sida burooyinkooda oo ay ka buuxaan silsilado, xirmooyin dabiici ah oo loogu talagalay ballaarinta dijitaalka. Tijaabooyinkan waxay ku filnayeen in lagu qanciyo injineero xeebeedyo dheeri ah si ay u baaraan suurtagalnimada isticmaalka tuubbooyinka loo yaqaan 'geotextile tube'.
Heerka la Bilaabey
Maaddaama tiknoolajiyadda tuubbada geotextile ay soo jiidatay feejignaan dheeri ah, baahida loo qabo in la abuuro halbeeg warshadeed si loo dhiso kalsoonida loona jiito feejignaan dheeri ah ayaa la ogaaday. Intii lagu guda jiray 1999, xubno ka tirsan shirkadaha wax soo saarka tuubada geotextile ayaa waxay ku biireen machadka cilmi baarista ee Geosynthetic (GRI) si loo sameeyo halbeeg warshadeed oo loogu talagalay soo saarista tuubbada geotextile iyo hababka rakibaadda. Dukumintiga cusub ee 'GRI' waxaa cinwaan looga dhigay "Hababka Tijaabada, Waxyaabaha, iyo Joogtaynta Tuubooyinka Geotextile ee Xoogga Sare leh ee loo isticmaalo qaab dhismeedka Xeebaha iyo Webiga." Dukumiintiga waa qeexitaan caadi ah oo loogu talagalay geotextiles loo isticmaalo soo saarista tuubooyinka, iyo sidoo kale qiyamka farsamo ee geotextiles-ka. Sidoo kale, qaabab been abuur ah iyo qaabab rakibida tuubooyinka iyo aqoonta looga baahan yahay qandaraaslaha rakibaadda ayaa lagu qeexay. In kasta oo dukumiintigaani uu yahay tilmaan wanaagsan oo lagu tilmaamayo tuubooyinka geotextile, maahan gargaar naqshadeyn ah.
Sida ay tilmaameen Sprague, Goodrum, iyo Bradley, oo ah qorayaasha "Tuubbooyinka Geotextile ee Waxyaabaha La Buuxiyey Dredged: Design and Construction," fikradaha lagu qaabeynayo walxo waaweyn oo qoto dheer oo laga buuxiyay tuubooyinka geotextile iyo konteenarradu si fiican looma diiwaangelin. Intaa waxaa sii dheer, shuruudaha guryaha ee geotextile si fiican looma fahmin oo faahfaahin yar ayaa laga soo sheegay hawlgallada qalabka qodidda ama waxqabadka noocyada kala duwan ee alaabada la qoday. Weli, rakibidda ku saleysan farsamooyinka naqshadeynta "sababaysan" ayaa la caddeeyay inay si guul leh u dhammaadeen. Sidaa darteed, farsamooyinkani waa barta bilowga ah ee lagu horumarinayo habab naqshadeynta oo si qoto dheer loo baaray.
Sugitaanka iyo ku haynta qaab dhismeedka tuubada dhuuban ee dhuunta leh ayaa waxaa bixiya baqshadda 'geotextile'. Xulashada dharku waxay kuxirantahay labadaba astaamaha furitaanka, oo waa inay u dhigmaan cabirka walxaha ay ka buuxdo iyo awoodda, iyo xoogga, taas oo kufilan inay iska caabiso buuxinta cadaadiska. Qolofka dharka isku-dhafan ee isku-dhafka ah iyo kuwa dhoobada ah iyo tolmo-siinta iyo xoogsaarka, siday u kala horreeyaan, mararka qaarkood waa la isticmaalaa.
Tuubbooyinka geotextile ee walxaha qallalan ka buuxa ayaa lagu buuxin karaa shey kasta oo awood u leh in loo qaado hydrogen ahaan. Waxyaabaha loo yaqaan 'Clayey' iyo 'silty silredged' ayaa loo isticmaalay codsiyada dixirida xakamaynta, laakiin xeebta si dabiici ah u dhacda ama ciidda webiga ayaa ah tan ugu fiican. Naqshadeeyaha waa inuu qiimeeyaa astaamaha degida ee walxaha buuxiya si uu uga caawiyo go'aaminta kala dheereynta habboon iyo inta jeer ee cirbadeynta iyo dekedda gargaarka ee tuubada geotextile.
Tuubo geotextile ah oo qayb ka mid ah iskutallaabta ayaa wareegsan oo geesaha ah oo dusha sare laga dhigay. Khibradda goobta waxay muujineysaa inay suurtagal tahay in la buuxiyo tuubooyinka 70 ilaa 80 boqolkiiba dhexroor ahaan aragti ahaan ugu badnaan, inkasta oo 50 ilaa 60 boqolkiiba ay aad u badan yihiin.
Si loo gaaro xasillooni marka loo eego xaaladaha daran ee haydarooliga sida jiidista, wiishka, iyo firfircoonida, gaaritaanka culeys aad u sarreeya oo cutub buuxa ah ayaa muhiim ah. Awoodaha hadda jira iyo kuwa mowjadaha waa in lagu qiyaasaa in lagu qiimeeyo xasilloonida tuubada geotextile ee la buuxiyey. Sprague wuxuu xusey in inkasta oo aan la samayn farsamo gorfeyn rasmi ah, hadana waxaa la soo jeediyey in habka loo yaqaan 'Miniken' ee wax laga badalay sida ku qeexan qeybta injineerada ciidamada Mareykanka; “Buugga Difaaca Xeebta Shoreline” wuxuu bixin karaa qaab macquul ah oo lagu qiimeeyo xasilloonida qaybaha la buuxiyay iyadoo la raacayo rarka mowjadaha. Tijaabooyinka moodelku waxay muujinayaan in boqolkiiba tuubbada geotextilaalka ee ay ka buuxdo walaxdu ay tahay halbeeg muhiim u ah xasilloonida. Tixgelin kale oo muhiim ah oo naqshadeynta ah ayaa ah degganaanshaha gudaha ee qaab dhismeedka tuubbada "is dulsaaran".
Sababtoo ah ficillada hadda jira iyo mowjadaha, qaab dhismeed ay dhisteen hal ama in ka badan tuubooyin ayaa kicin kara dalool nabar ah oo si toos ah ugu dhow, taas oo sababi karta xasillooni darro jireed. Sidaa darteed, naqshadaha waa inay ku jiraan shaashadda miiraha marada loogu talagalay ilaalinta aafada. Dufanka dharka miiraha ah, oo sidoo kale loo yaqaanno astur aagga, badanaa wuxuu ka kooban yahay tuubo yar, oo loo yaqaan 'tubbo barroosinka', oo lagu farsameeyey geeska badda ee hareeraha ama hareeraha oo dhan. Tuubada barroosinka waxay ka buuxsameysaa walax la jarjaray si loo xasiliyo xayndaabka dusha sare. Waa inay lahaataa astaamo kala sifeyn oo ku habboon ciidda aasaaska ah iyo ciidda barroosinka ee ciidda buuxisa. Duufaanku waa inuu fidiyaa masaafo ku filan hore iyo gadaal qaab dhismeedka tuubbada geotextile si looga hortago aafada aasaaska.
Rakibaadda Qalabka Geotextile Tube
Tixgelinno kaladuwan ayaa loo baahan yahay in wax looga qabto qalabka rakibaadda tuubbooyinka. Intooda badan waa in looga hadlo faahfaahinta mashruuca. Maadaama tuubooyinkaasi ka samaysan yihiin joomatari ahaan, tilmaamaha ASTM ee caadiga ah waa in la raacaa oo la xiriira kaydinta iyo wax ka qabashada. Tilmaamaha ASTM ee la xiriira been abuurka 'geotextiles' sidoo kale waa in lagu raaco xarunta been abuurka.
Kahor tuubbooyinka dhuuban ee loo yaqaan 'geotextile iyo aprons' scour-ka loo diro goobta, aagga inta badan waxaa loo diyaariyaa iyadoo la adeegsanayo qalabka qiimeynta guud. Goobta ay ku yaalliin tuubbooyinka loo yaqaan 'geotextile tube' waxaa sida caadiga ah lagu calaamadiyey heer fasal. Jaranjarooyin waaweyn ama xiro ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa meeleeynta horay loo sii go'aamiyey si tuubbada juquraafi ahaan loogu xiraa iyaga xarig si loo hubiyo in la waafajiyo habboon inta lagu jiro buuxinta.
Kaqeybgalida tuubbada karbaashka iyo tuubada dhuunta ee loo yaqaan 'geotextile tube' waxaa badanaa lagu dhameeystaa iyada oo laga fogeeyo xudunta (ama tuubbada), oo ay keento tuubbada iyo tuubbada ay soosaaruhu soo saareen. Xanuunka loo yaqaan 'scour apron' waxaa la geynayaa kahor tuubada dhuunta 'geotextile', si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood garaafka cabbiraha waxaa lagu xiri karaa salka tuubada dhuunta joodiyaha ee warshadda. Mar alla markii garabka si buuxda loo daad gureeyo, la meeleeyo, lana xafido, tuubada dhuunta ayaa la diiwangeliyay. Waa in loo diwaangaliyaa iyada oo lagu durayo dekedaha iyo gargaarka ay kor usii jeedsaneyso dhanka khadka sare. Mar haddii la geynayo, waxaa lagu keydin karaa alwaaxyada safka hore ee lagu rakibay ama barafka.
Tuubbooyinka barroosinka ee ku yaal dusha sare ee dusha sare ayaa badanaa la buuxiyaa marka hore si loo siiyo ballast loogu talagalay aagga. Tuubada barroosinka waxaa mararka qaarkood lagu buuxiyaa isla qalabka wax lagu shubo ee loo isticmaali doono in lagu buuxiyo tuubada geotextile; si kastaba ha noqotee, mashiin yar ayaa sidoo kale la isticmaali karaa maadaama tuubooyinka barrootigu ay caadi ahaan aad u yar yihiin (dhexroor laba-cagood ah ama ka yar). Mashiinka tuubbada tuubbada mashiinka lagu xiro waxaa lagu tagi karaa iyada oo si fudud loo jajabiyo geotextile ama dekedo laga soo galo oo horay loo sii diyaariyay.
Kadib markii guntinka dhibbanaha lagu xaqiijiyo buuxinta tuubbooyinka xiidmeerka, tuubada dhuunta ayaa la buuxiyaa. Hawshani waxay qaadan doontaa waqti aad u dheer waxayna aad uga sii adag tahay sidii si fudud loo buuxin lahaa tuubooyinka suxuunta. Tuubada dheecaanku ka soo baxayo (ama dillaaca) ee qulqulka waa in lagu meeleeyaa gudaha irbadda ku habboon ee tuubbada dhuunta-gaaska leh. Dekedaha la isku duro waxaa laga sameeyay isla isku-dhufaysyo isku-xir ah oo sameeya tuubbada lafteeda. Dekedaha ayaa badanaa ah cagaha 5 (1.5 m) dhererkoodu yahay 18 inji (457 mm) dhexroor, si kastaba ha noqotee, tuubbada dredge waa inaysan noqonin tan weyn; sida caadiga ah sideed ilaa 12-inji (305 mm) tuubbo dherarkeed ayaa la isticmaalayaa. Tuubbada waa in la geliyaa qiyaastii 2 / 3 ee dariiqa irbadda lagana ilaaliyaa isku xirnaanta xiisadda. Xidhitaanka tuubbada iyo dekada mudista oo lagu ilaaliyay xayiraad kacsanaan ah. Xidhitaanka tuubbada iyo isku xidhka dekeda waa in loo qaadaa meel toosan oo leh dib-u-dhis ama adkeynin.
Badi tuubooyinka joodiyaasku waxay lahaan doonaan dhowr deked duritaan oo dhan dhererka tuubada. Dekedaha ayaa caadi ahaan ku yaal khadka dhexe ee ugu sarreeya xaddiga aan ka badnayn cagaha 50 (15 m). Dekedahaan waxaa loo shaqeeyaa buuxinta iyo sidoo kale kaabeynta biyo xad-dhaaf ah. Go'aan ka gaadhista kala-sooca dekeddu waa inuu sameeyaa qandaraasle iyo / ama injineer kahor abuurista tuubbooyinka 'geotextile tube'. Dhowr arrimood ayaa saameyn ku yeelan doona kala dheereynta habboon, sida cabbirka guud ee tuubada dhuleed, cabbirka tuubada qulqulka, cabbirka dareeraha ee qulqulka, nooca buuxinta, iyo xaddiga biyaha loo adeegsanayo gaadiid raaca xamuulka.
Waxay kuxirantahay meeleeynta irbadaha mudista, iskuxirka walxaha la daadiyay, iyo awooda awooda leexinta, qaar kamid ah dekedaha mudista lama isticmaali doono gabi ahaan. Tusaale ahaan, 200-cagta (61 m) tuubbooyinka dhaadheer ee geeti-sare ayaa laga yaabaa inay ku jiraan shan deked duritaan. Haddii shuruudaha ay fiican yihiin oo qulqulayadu ay awood leedahay, waxay u badan tahay in dhammaan xNUMX-cagta (200 m) tuubbooyinka dhaadheer ee geeti laga buuxiyay laga soo buuxin karo hal deked duritaan oo ku dhow hal dhamaadka tuubbada. Dekada duritaanka ee ku taal masaafada fog waxaa looga tegi doonaa mid furan oo u oggolaanaya eriga biyo xad-dhaaf ah, iyada oo u shaqeysa dekedda gargaarka. Dhamaan dekedaha ku dhexyaala waa la xirayaa waana laga tegi doonaa iyadoo aan la adeegsan. Haddii shuruudaha aysan ku habooneyn buuxinta hal deked, markaa kala-goynta saxda ah ee loogu dhaqaajin karo tuubbada qulqulka ee sii wadidda buuxinta tuubbada waa in la go'aamiyaa. Hawlaha Buuxinta waxaa loo sameeyaa si isku xigxiga iyadoo la adeegsanayo hal deked duritaan iyo hal (ama in ka badan) deked (raajo). Inta hawlgalku socdo, dhammaan dekedaha ku yaal qaybaha tuubada waa in la xiro si looga hortago in alaabta ku lumaan tuubada dhexdeeda.
Kahor buuxinta wax walboo adag, tuubooyinka waxay ka buuxsamayaan dhererkooda biyo kaliya. Mar alla markii la gaaro dhererka la rabay in la gaaro, howl wadeenada qulqulaya ayaa soo bandhigi kara cunnooyinka tuubbada tuubbooyinka. Marka ugu horeysa tubbada biyo lagu buuxiyo, maadada adag ayaa loo oggol yahay in si siman loogu qaybiyo. Cunnooyinka adag ee dhowaan la soo saaray iyo biyaha gawaarida ayaa si fudud u riixi doona biyaha jira.
Mashaariicda badankood waxay ka kooban yihiin tuubooyin fara badan oo geotextile ah oo ay tahay in lagu buuxiyo qaab horey loo sii dejiyey. Tuubo kasta badiyaa waxaa la buuxiyaa ka hor inta aan la rakibin tuubooyinka geotextile ee soo socda. Tuubooyinka soo socda ayaa markaa la saari karaa tuubbada jirta oo la buuxin karaa. Qaabkan rakibiddu wuxuu abuuri doonaa aag hoose oo u dhexeeya tuubooyinka sababo la xiriira darafyadooda wareegsan. Haddii dhibco hoose aan la rabin, habab kale oo xiriir ah ayaa la adeegsan karaa. Dhaqanka ugu badan ee rakibaadda si looga takhaluso, ama ugu yaraan loo yareeyo, xaddiga niyad-jabka waa iyadoo la adeegsanayo iskudhaf. Noocan ah isku xirnaanta, tubbo kasta oo geotextile ah oo soo socota (iyo badiyaa baqaarka dusha sare) waa in la dhigaa dhamaadka dabada ee tuubada horey loo geeyay. Tuubada "la hoos dhigay" ayaan si buuxda loo geyn waqtigan. Sida iska cad, nidaamkan is-dulsaaran waa in la dhammaystiraa ka hor inta aan la buuxin tuubbada geotextile midkood biyo ama adag. Marka xiriir la sameeyo, tuubada geotextile ee “ugu horreysa” waa la buuxiyaa sidii horey loogu sharraxay. Tuubo kasta oo ku xigta sidoo kale waxaa loo buuxiyaa qaab isku mid ah, si kastaba ha noqotee, qaybta tuubada ee hoosta la galiyay lama buuxin doono waana in ay dhashaa isku xirnaan (iyo dherer buuxa).
Markii la dhammeeyo rakibidda, dekedaha la isku duro waa in si habboon loo hubiyaa si loo hubiyo inaysan ku jajabin dhacdooyinka mowjadda. Habka saxda ah ee lagu xaqiijinayo dekedaha duritaanka waxaa bixin doona soo-saareyaasha tuubbooyinka loo yaqaan 'geotextile tube'. Si kastaba ha noqotee, hab caadi ahaan loo adeegsado ayaa ah in si fudud looga jaro dekada mudista, iyadoo loo oggolaanayo maro aad u badan in la rogo (ama hoos loo dhigo) oo loo daadsho dusha sare ee tuubbada. Qalabka isku laaban ayaa markaa lagu dhejiyaa sagxadda tuubbada adoo adeegsanaya farqadaha qufulan oo u adkaysan kara taabashada ama isugeynta nooca cadaadiska.
Tuunbooyinka la buuxiyo iyo kuwa xidhan ayaa sii wadi doona biyaha daadashada iyo adkahayaasha ayaa sii xoojin doona ilaa wakhti. Muddada qubitaanka iyo isugeynta ayaa kala duwanaan doonta iyadoo kuxiran nooca joomatari ahaan iyo waxyaabaha buuxu. Caadi ahaan, maaddada isku-dhafka ah ayaa biyuhu ka dheereeyaan si ka dhaqso badan sheyga wanaagsan sida dhoobada xariifka ah. Marka qaddarka la filayo ee biyo-fadhiishu ay dhacdo, tuubbooyinka juquraafi ahaan la aasi karo, dib-loo-buuxin karo, iwm.
In kasta oo tikniyoolajiyadda dhuuban ee ay ka buuxaan tignoolojiyadda dhuunta leh loo adeegsaday sanado badan, haddana mashruucyo heer sare ah oo heer sare ah ayaa soo jiidatay warshadaha. Adoo iskaashi la samaynaya GRI si loo diiwaangaliyo qeexida halbeegga warshadaha, habka ayaa helay sumcad dheeri ah. Teknolojiyadda iyo warshaduhu wali waa da 'yar yihiin, laakiin hab-maamuusyada cusub iyo ka sii wanaagsanba ayaa la rumeeyaa maalin kasta. Mustaqbalku runti wuxuu u muuqdaa mid dhalaalaya tuubooyin dhuuban oo dhuuban.
(Geotube® waa summad ka diiwaan gashan Ten Cate Nicolon)
Waxaa laga soo xigtay CE News ee loogu talagalay Ganacsiga injineernimada